IXiaomi Mi A1 ene-Android Oreo ihlupheka kakhulu kukusilela | I-Androidsis
UEder Ferreño | | Iinguqulelo ze-Android, Xiaomi
IXiaomi Mi A1 yenye yeefowuni ezibaluleke kakhulu ezaphehlelelwa uphawu lwesiTshayina kunyaka ophelileyo. Ibe yinto yokuqala yophawu ukusebenza ne-Android One.Ngoko linyathelo elikhulu kwimpawu. Kwakhona, ngaphambi kokuphela konyaka, Uhlaziyo lwe-Android Oreo lwenziwa ukuba lufumaneke kubasebenzisi. Kwaye ke zonke iindaba ezimnandi.
Kodwa emva kweentsuku ezimbalwa imeko yahlukile. Ukusukela uhlaziyo kwi-Android Oreo ingunobangela weengxaki ezininzi kwiXiaomi Mi A1. Oku kungqinwa ngabasebenzisi ababukele ngezixhobo zabo bayasilela. Kuqhubekani?
UXiaomi wathembisa ukuba uhlaziyo luya kufikelela kwifowuni ngaphambi kokuphela kwe-2017. Okokugqibela, uhlaziyo lwakhutshwa nge-31 kaDisemba efanayo. Kodwa, kubonakala ngathi uphawu lwangxama kakhulu ukuba luhlangabezane nexesha elibekiweyo. Njengoko Inika abasebenzisi ingxaki enkulu.
Abasebenzisi beXiaomi Mi A1 baxela ubuninzi beebugs ezahlukeneyo kuba bane-Android Oreo ifakwe kwisiphelo sakho. Ezi zezinye zeebugs ezixeliweyo ukuza kuthi ga ngoku ngabasebenzisi:
Inkqubo yekhamera ivalwa ngokungalindelekanga
Ukubaleka okugqithisileyo kwebhetri kusetyenziswa ii -apps zangasemva ngaphandle kokuba uDoze ethembisa ngolawulo olungcono lwebhetri.
Inzwa yeminwe yeminwe iphelile kulawulo lwezandla
Izicelo ezininzi ziyeke ukusebenza kwaye kufuneka uzinyanzele
Kwiminxeba emininzi akunakwenzeka ukuba uve umntu ofowunayo
Umboniso we Ambient uyekile ukusebenza kakuhle
Ukudityaniswa kweBluetooth kunye ne-4G kunika iingxaki ekusebenzeni kwaye eyokuqala isebenzisa ibhetri eninzi
Iimpazamo zininzi, kodwa zonke zinento efanayo yokuba zenza ukuba ukusetyenziswa kwefowuni kubi kakhulu Yabasebenzisi. Ngapha koko, kubonakala ngathi le meko ayimnandanga, ukuba abasebenzisi beXiaomi Mi A1 Cebisa ukuthintela uhlaziyo kwi-Android Oreo.
Ubuncinci ungayihlaziyi ngalo mzuzu kwaye linda uXiaomi ukulungisa imeko ngokukhawuleza. Kubonakala ngathi ukukhawuleza akukhange kulunge kwinkampani ngokungathandabuzekiyo ekufuneka isombulule le ngxaki ngokukhawuleza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Iinguqulelo ze-Android » Uhlaziyo kwi-Android Oreo lubangela ukusilela kwiXiaomi Mi A1
I-Oaxis Londoño sitsho
Ewe kunjalo, ukongeza: iingxaki kulawulo lwezaziso, iingxaki zokuvumelanisa ii-imeyile, ukunqunyulwa ngokukhawuleza kweefowuni, impazamo rhoqo nabafowunelwa, ukungabizi ngokukhawuleza ngokukhawuleza ... njl, njl.
Impazamo enkulu ukuba ndikhuphe i-beta enje ngesi sixhobo sikhulu, indifikele kwinqanaba lokuyeka ukuyisebenzisa ndibuyele kwifowuni yam yakudala .. Lihlazo.
Phendula kwi-Oaxis Londoño
NdineMi A1 yam ehlaziyiweyo eya e-Oreo kwaye khange ndibone ngxaki. Inzwa yeminwe isebenza ngokugqibeleleyo, iifowuni zihamba kakuhle ... Ukuba kuye kwakho ukuvalwa kwesicelo bekuqhubeka kakhulu, andazi ukuba kuyasebenza na kuhlaziyo.
UEder Ferreño sitsho
Ukuba khange unyanzele ukuvala usetyenziso ndiyathandabuza ukuba yingxaki. Kodwa, kule nto uyithethayo, kubonakala ngathi akukho nto ingaqhelekanga kwimeko yakho! Ngethamsanqa!
Phendula uEder Ferreño
I-Bluetooth ifunxa ibhetri yam kakhulu. Ndibonile ukuba ndide ndichithe iipesenti ezingama-45 ngaphandle kokuyisebenzisa, umzekelo, ukudibanisa ii-headphone ..
Ngaba yenzekile kuwe ukusukela uhlaziyiweyo? Kungenxa yokuba leyo yinto eyabikwa ngabasebenzisi abaninzi okoko kwaphuma uhlaziyo. Ke inokuba inxulumene.
Oko ndihlaziyileyo. Nge-Android 7 yayineeyure ezingama-4 zesikrini, ngoku umndilili weeyure ezi-5 kunye nokuncinci. Kudala ndisebenzisa i-oreo malunga neentsuku ezili-2 kwaye ekuqaleni bendicinga ukuba esinye isicelo siyitsala ibhetri yam, kodwa ukumangaliswa kwam kukhulu xa ndibona ukuba ibluetooth yeyona nto ibambekayo. Ayikho i-smartphone endinayo ukuza kuthi ga ngoku kwaye bambalwa, ukusetyenziswa kwebhetri yile nkonzo kuye kwahlazisa kakhulu.
Ngendlela, ndihlala ndineBluetooth esebenzayo ukuze ibhendi yam 2 inyikime xa ndifumana iifowuni. Ukusukela emsebenzini ndinayo ndithule. Ngaphambili, ukusetyenziswa kwebhetri kule nkonzo kwakubaluleke kakhulu kwaye ezinye iiapps ezinje ngeWhatsApp kunye neminye imidlalo yayiyeyonyusa ukusetyenziswa kwebhetri.
Andinazo ezininzi kwezi bugs, abantu kukuba bayahlaziya ngaphandle kokusetha kwakhona kwaye bafaka i-oreo kwindawo emdaka emva koko kwenzeka ntoni, ewe inezinto zayo, kodwa kakhulu njengoko zichaziwe iimpazamo, hayi, ubuncinci andisokoli. kubo, Into yeBluetooth njengoko kukhankanyiwe yimbonakalo yegrafikhi kunayo nayiphi na enye into.
Iigusha ezimnyama sitsho
Eyam ihlaziyiwe ngomhla we-5, kwaye andinazo naziphi na iingxaki ozixelayo, 0 app crashes, 0 call cut, battery maintain and I even think its duration is improved, if it is true that it is clean since it it Unenyanga enesiqingatha kuphela, ngokufutshane ngoku ngaphandle kwengxaki.
Andinayo nayiphi na ingxaki ekhankanyiweyo, umba weenyawo kukuba ukuba ukhetho lwezimbo zomzimba alusebenzi kwaye uyaluhlaziya emva koko ulahleke kuba kwi-oreo ayinakwenziwa isebenze, ndicinga ukuba ndiyifundile loo ndawo.
Ibhetri yam intle kakhulu, nditsho ndiphucula kancinci, ihlawulisa ngokukhawuleza kunangaphambili, ngokubhekisele kwiBluetooth andikwazi ukuphawula, andiyisebenzisi
Mholo. Ndine-A1 yam kwaye nenguqulo yakudala ye-Android isebenze kulungile. Kodwa xa uhlaziya ukuya kwi-Oreo, xa usenza iminxeba, ndaphinda ndaphinda ndaphinda ndaphinda ndayiqala kwakhona kwiscreen se-Android One hayi amaxesha amaninzi kodwa amaxesha amaninzi. Ngaba ikhe yenzeka komnye umntu? Ngaba ukhona umntu owaziyo ukulungisa?
Phendula u Lungisa
Molo, iMi A1 yam ekuqaleni kohlaziyo khange ibenangxaki, nangaphezulu, ibihamba kakuhle kakhulu (ayithethi ukuba ngaphambi kohlaziyo yayintle kakhulu). Kodwa kwangaxeshanye ikhibhodi iyekile ukusebenza kakuhle, andazi ukuba kungenxa yolu hlaziyo ukuba ubeke izimvo, kuba khange ihlupheke ziingxaki zebluetooth, ukuvimba iiapps kunye nokucima iifowuni. Ngethemba lokuba baya kuyilungisa kungekudala.
UFrancisco Javier Carcedo Gonzalez sitsho
Andazi ukuba izakuhambelana na nohlaziyo, kodwa ndikhuphele iifayile ze-pdf kwelinye iphepha kwaye ke ndizama ukwaba nge-wasap kwaye indixelela ukuba »ifayile ekhethiweyo ibingelo xwebhu» kwaye ndiyayenza ukusuka kwenye i-terminal bq, i-motorola kwaye indivumele ndiyenze ngaphandle kweengxaki. Sele ndikuxelele ukuba andazi ukuba izakuxhomekeka kwi-oreo, kodwa ndiza kuyishiya apho xa kunokwenzeka ukuba yenzeke kuye nawuphi na kuni kwaye nifuna ukuphawula ngayo. Ngokukodwa phantsi kwepdf evela kwibhlog kwaye uyikhuphele kum kwiifayile usetyenziso oluza ngokwendalo, ukusuka apho ndizama ukwaba i-pdf kuye nakowuphi na unxibelelwano kwaye ayizukundivumela. Ayenzeki kum nazo zonke iifayile kodwa ezinye…. Ndiyishiya apho.
Phendula uFrancisco javier carcedo gonzalez
UMisael Munoz sitsho
Ndidanile, iimpazamo ezininzi kuba ihlaziyiwe yenguqulo 8.0, iyatshisa kakhulu, ixhomeke kakhulu, ayiphenduli kumchukumisi, isivamvo somnwe somnwe asiphumeleli kakhulu, xa sigqiba ukusebenza kwefowuni kuyothusa .. .
Phendula uMisael Muñoz